Man United Oo Rigoorada Guusha Loo Dhigay Ka Dib Markii Uu
Kulan waali ahaa ayaa ka dhacay maanta garoonka Amex Stadium iyadoo ay jireen wax badan oo laga diiwaangeliyay kulankii maanta oo ay Man United 3-2 kaga badisay Brighton.
Brighton ayaa shan jeer brita u garaacday Man United halka kooxda martida loo ahaa ay goolka barbaraha dhalisay daqiiqadii 5aad ee shan daqiiqo oo ciyaarta lagu daray.
Laakiin markii ay u muuqatay inay ciyaarta ku soo dhamaaneyso barbaro 2-2 ah ayaa Man United loo dhigay rigoore sax aheyd madaama uu Maupay kubada gacanta ku taabtay, waxaana rigoorada dhaliyay boqorka rigoorooyinka Bruno Fernandes oo guusha u xaqiijiyay Red Devils.
Balse waxaa muran ka taagan yahay waqtiga rigoorada la dhigay, isla ilow in rigoorada la dhaliyay daqiiqadii 100aad ee ciyaarta balse garsooraha ayaa go’aanka rigoorada qaatay xilli uu yeeriyay seerigii ugu danbeeyay ee ciyaarta.
Waxay tani noqoneysaa markii ugu horeysay ee ciyaar dhamaatay dib loo bilaabay si loo dhameystiro qalad dhacay ka hor dhamaadkii ciyaarta.
Garsooraha ayaa ku degdegay inuu yeeriyo seerigiisa dhamaadka ciyaarta madaama uu markii hore aaminsanaa in rigoore aysan jirin, laakiin markii VAR ay u sheegtay inay rigoore sax ah tahay, wuxuu bilaabay inuu daawado shaashada VAR isagoo go’aansaday inuu rigoorada dhigo.
Tababaraha kooxda Brighton Graham Potter oo ciyaarta markii ay soo dhamaatay la hadlayay BT Sport ayaa yiri: “Waxaan u maleynayay in darbadii ugu danbeysay aan anagu gool dhalinay, sidaasi darteed ma garanayo halka uu ka yimid waqtigaan dheeriga ah. Waa cadowtinimo weyn”
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa isna ciyaarta ka dib yiri: “Haddii aan daacad u hadalno, nasiibka ayaa na saaciday kulankaan. Waan ognahay inaan u baahanahay inaan sameynso horumar badan”
Waa markii seddexaad oo gool la dhaliyo daqiiqada 100aad ee kulan Premier League ah ka dib Dirk Kuyt (102′) oo u dhaliyay Liverpool bishii April 2011 iyo Juan Mata (101′) oo u dhaliyay Chelsea bishii Agoosto 2011.
a militia attack kills ten people in Lubumbashi
Mesut Ozil Oo Laga Shaqo Galiyay Kooxda Roma, Nooca…
The Ministry of Public Health is…